Video Tutorial Blockchain Crypto iyo Canshuurta
Isweydaarsiga Crypto Blockchain
Sidee cryptocurrency u shaqaysaa? Maxaad u iibsanaysaa Cryptocurrency? Sidee cryptocurrency u kordhaa qiimaha? Waa kuwee cryptocurrency si loo maalgaliyo 2021? Waa maxay Teknolojiyada Blockchain? Sidee ayuu Blockchain u shaqeeyaa? Ayaa adeegsada Blockchain?
Fiidiyowga 'Crypto Blockchain Exchange'
Maxaa loo adeegsadaa cryptocurrencies?
Qof kastaa wuxuu ka hadlaa cryptocurrencies, laakiin dhab ahaan ma ogtahay waxa loogu talagalay? Ma ogtahay farqiga saxda ah ee u dhexeeya Coin iyo Token?
Maxaa ku dhacaya bitcoin oo in ka badan labanlaabtay toddobaadyo yar gudahood? Ma jiraa istaroog cusub oo waalli mala-awaal ah oo ku saabsan cryptocurrency? Aragtida Philippe Béchade, tifaftiraha guud ee La Bourse au Quotidien.
Hasheur wuxuu ku siinayaa sirtiisa sirta ah waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'!
Ma ka hadlaynaa?
Antoni Ruiz iyo Damien Douani waxay ku heleen YouTube-ka Owen Simonin oo loo yaqaan Hasheur. In kabadan 250 oo raacayaal kanaalkiisa. Wuxuu caan ku yahay teknoolojiyada kala duwan, farsamooyinka iyo istaraatiijiyadaha adag ee ganacsiga adduunka.
Jean-Paul Delahaye waa borofisar ku takhasusay Jaamacadda Lille, waa cilmi-baare ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista ee Xogta, Calaamadaha, iyo otomaatiga Lille ee CNRS. Takhasuskiisu waa aragtida kakanaanta, iyo gaar ahaan codsiyada dhaqaalaha iyo xannibaadaha.
Bitcoin iyo Blockchain
Waa maxay Bitcoin? Sidee u shaqaysaa? Sidee farsamada loo yaqaan 'Blockchain technology' u suurtagelisaa in la sugo?
Exchange Binance min A ilaa Z
Laga soo bilaabo bilowga ilaa isticmaaleyaasha horeyba u lahaa koontada: dib-u-eegiddani waxay dabooleysaa oo sharraxaysaa astaamaha ugu muhiimsan ee ganacsiga, isdaba-marinta, amaahinta iyo xaqiijinta kripto iyo Hasheur.
Fiidiyowga Canshuurta Crypto 2021
Canshuuraha iyo Cryptocurrencies
Sannad kasta, cashuur-bixiyeyaashu waa inay fayl garaystaan ​​soocelintooda canshuur celinta si habboon oo loo dhammaystiray Juun (taariikhda saxda ahi way ku kala duwan tahay waaxda). Iyo milkiilayaasha nasiibka leh ee Bitcoin, Ripple, Dash iyo kuwa kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' waa inay ku xusaan soo laabashadoodii guulaha la gaadhay. Waa maxay nidaamka canshuuraha ee hadda jira? Sidee loogu caddeeya dakhligaaga hay'adaha canshuuraha? Dhamaan sharaxayadayada.